Valim-panontanianao | mTomady.mg
Appeler 556 (Numero Vert)
Raha misy fanontaniana tsy hitanao ato na raha mila fanazavana fanampiny, dia antsoy maimaimpoana ny 556
Mahakasika ny mTOMADY
Fanokafana ny tahiry mTOMADY
Fampiasana ny kaonty mTOMADY
Fampiasana ny mTOMADY ho amin’ny fitsaboana
Mahakasika ny tombony na bonus mTOMADY
Miala amin’ny mTOMADY
1. Inona ny mTOMADY?
Fitehirizam-bola amin’ny telefaonina ny mTOMADY, ahafahana mandray sy manangom-bola hiantohana ny fahasalamana mandritry ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana.
2. Iza no namolavola ny mTOMADY?
“Doctors for Madagascar” no namolavola ny mTOMADY izay iarahany miasa amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara.
3. Iza ny “Doctors for Madagascar”?
Ny “Doctors for Madagascar” dia fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana naorin’ny dokotera maromaro avy any Alemana. Ny tanjony dia ny fanatsarana ny fitsaboana eto Madagasikara amin’ny alàlan’ny fampiofanana, fanatsarana ny foto-drafitr’asa, fampitaovana sy ny fanomezana fitsaboana ny marary.
4. Iza no sokajin’olona kendren’ny mTOMADY?
Ny vehivavy bevohoka sy ireo tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny vohoka ao amin’ny CSB II sy hopitaly eto Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano ary Antananarivo Avaradrano no misitraka ny mTOMADY mandritry ny roa taona voalohany hanatanterahina azy eto Madagasikara. Hihitatra amin’ny faritra hafa kosa izany aoriana.
5. Inona ny tanjon’ny “Doctors for Madagascar” amin’ny mTOMADY?
Mandrisika ireo vehivavy hanao tahiry ho fiomanana amin’ny fiatrehana ny fiterahana ny mTOMADY. Tanjona amin’ny mTOMADY ny fanampiana ireo vehivavy bevohoka amin’ny fanamorana sy fanamafisana ny fangaharahana amin’ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny telefaonina. Amporisihina hizaha fahasalamana sy hiteraka eny amin’ny CSB II sy hôpitaly mpiara-miasa ny vehivavy bevohoka.
6. Inona avy ireo tolotra amin’ny mTOMADY ?
Ny mTOMADY dia manome kaonty ahafahan’ny vehivavy bevohoka mitahiry vola amin’ny alalan’ny telefaonina, hiatrehany ny fiterahana .NY mTOMADY dia manohana ireo CSB II mpiara-miasa amin’ny alàlan’ny fampitaovana sy fanomezana fiofanana ho fanatsarana ny kalitaon’ny fitsaboana sy ny fandraisana.
7. Inona avy ny tombotsoa amin’ny fampiasana ny mTOMADY ?
Rehefa miditra mTOMADY ianao dia misitraka tolotra tsara kalitao sy maimaimpoana : Mahazo tombony 50 % isaky ny taha-bola arotsaka, kadoa andoavana vidim-panafody.Maimaimpoana ihany koa ny “echographie” mandritry ny fitondrana vohoka ary mahazo fitaterana maimaimpoana amin’ny ambulance raha sanatria misy fahasarotana.
8. Iza no tokony horesahina raha sendra misy olana?
Antsoy maimaimpoana ny laharana 556 raha misedra olana amin’ny fampiasana ny mTOMADY ianao. Ankoatr’io laharana io dia azonao atao ny manatona mivantana ny solotenan’ny mTOMADY eny amin’ireo tobim-pahasalamana mpiara-miasa.
1. Ahoana no ahafahako manokatra kaonty mTOMADY ?
Manatona ny solotenan’ny mTOMADY izay manentana isam-pokontany, na ireo mpaninjaran’ireo tambazotram-pifandraisana ampiasainao. Vakio ary ankatoavy ny fepetra fampiasana ny mTOMADY hitanao eny amin’izy ireo na ao amin’ny www.mtomady.com. Afaka manatona ireo solotenan’ny mTOMADY eny anivon’ny CSB II sy hopitaly ihany koa
2. Inona avy ny antotan-taratasy ilaiko raha hanokatra kaonty na tahiry mTOMADY aho?
Manana karatra fiantso (carte SIM) Airtel, Orange na Telma amin’ny anaranao ianao. Manana karapanondrom-pirenana (CIN) na taratasy fanamarinam-ponenana ho an’ireo mbola tsy ampy taona. Tsy voatery efa manana kaonty Mvola na Airtel money na Orange money.
3. Afaka manana kaonty mTOMADY mihoatra ny iray misoratra amin’ny anarako ve aho ?
Na mampiasa laharana samihafa aza ianao dia iray ihany ny kaonty mTOMADY afaka soratana amin’ny anaranao.
4. Inona no atao raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso ?
Raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso dia mila manatona ny tambazotram-pifandraisana ampiasainao ianao hanidy ny laharan’ny karatra fiantsonao (carte SIM). Aorian’izay dia soloy vaovao ny carte SIM. Rehefa azonao ny SIM vaovao dia antsoy ny 556 na manatona mpiasa mTOMADY ahazoanao dia afindra amin’ny laharanao vaovao ny vola ao amin’ny tahiry mTOMADY.
5. Ohatrinona ny petra-bola kely indrindra ahafahana manokatra kaonty mTOMADY ?
Tsy misy ny petra-bola kely indrindra takiana amin’ny fanokafana ny kaonty mTOMADY.
6. Raha misy diso ny mombamomba ahy amin’ny kaonty mTOMADY, ahoana no ahafahana manitsy izany ?
Ahafahanao manitsy ny mombamomba anao amin’ny mTOMADY dia manatona ny solotenan’ny mTOMADY na antsoy maimaimpoana ny laharana 556.
7. Ahoana no ataoko raha mbola tsy manana Airtel Money, Orange Money na MVola aho ?
Mila manana kaonty amin’ny telefaonina ny fidirana amin’ny mTOMADY. Raha mbola tsy manana ianao dia afaka manampy anao hanokatra izany ny solo-tenan’ny mTOMADY.
1. Misy safidy iray manokana amin’ireo tambazotram-pifandraisana (Airtel, Orange, Telma) ampiasaina ve raha hampiasa mTOMADY ?
Mila manana kaonty amin’ny telefaonina ianao mba ahafahanao mampiasa ny mTOMADY; koa manatona ny solotenan’ny mTOMADY izay manentana isam-pokontany na eny amin’ny mpaninjaran’ireo tambazotram-pifandraisana ampiasainao hanampy anao hanokatra izany.
2. Azo antoka ve ny tahiry amin’ny mTOMADY ?
Azo antoka sy voaaro ny tahiry sy ny antontan-kevitra rehetra amin’ny mTOMADY satria mampiasa ireo fenitra sy fanaraha-maso iraisam-pirenana mifanaraka amin’izany ny Doctors for Madagascar.
3. Mora amiko ve ny hikirakira ny kaontiko na aiza na aiza misy ahy?
Afaka mikirakira ny kaonty mTOMADY amin’ny alalan’ny telefaonina ianao, amin’ny alàlan’ny fanarahana ny toromarika omena anao ao.
4. Tsy maintsy mandrotsaka vola tsy tapaka ve raha mampiasa mTOMADY (isan-kerinandro, isam-bolana) ?
Malalaka ny fandrotsahana vola ao amin’ny mTOMADY. Homena anao ny mety ho saran’ireo fitsaboana sy fanafody samihafa ka ianao ihany no mandamina sy mandanjalanja ny vola arotsakao arak’izay mety aminao.
5. Azoko atao ve ny mandefa vola avy amin’ny kaontiko Airtel Money/ Orange Money/ MVola mankany amin’ny tahiriko mTOMADY?
Afaka mandefa vola amin’ny tahiry mTOMADY avy amin’ny kaontinao Airtel Money/ Orange Money/ MVola araka izay irianao ianao.
6. Ahoana no ahafahako mandefa vola avy amin’ny kaontiko Airtel Money/ Orange Money/ MVola mankany amin’ny tahiriko mTOMADY?
Mba ahafahanao mandefa vola amin’ny tahiry mTOMADY avy amin’ny kaontinao Airtel Money/ Orange Money/ Mvola, safidio ny tambazotram-pifandraisana ampiasainao ary araho ny toromarika voalaza.
7. Ahoana no ahafantarako fa nirotsaka tao amin’ny kaontiko mTOMADY ilay vola nalefa?
Maharay SMS ianao manamarina ny vola nirotsaka ao amin’ny kaontinao sy mampahafantatra ny toe-bolanao.
8. Ahoana no ahafantarako fa tsy mihoatra ny tokony ho izy ny vola asaina alohako ?
Ireo hopitaly sy CSB miara-miasa amin’ny mTOMADY dia mampiseho anao ny lisitra mirakitra ny saran’ny fitsaboana mialohan’ny andoavanao izany. Manasa anao hanamarina ny saran’ny fitsaboana milohan’ny handoavanao izany ary hampiditra ny kaody.
9. Azo foanana ve ny fandefasana vola raha eo am-panatanterahina izany?
Raha toa ka mila hajanona ny fandefasana vola tao aorian’ny nampidirana ny TAN dia antsoy maimaimpoana ny 556.
10. Afaka mamindra vola avy ao amin’ny mTOMADY makao amin’ny kaonty Airtel Money, Orange Money na Mvola ve aho ?
Ny vola ao amin’ny mTOMADY dia tsy afaka afindra amin’ny kaonty Airtel Money, Orange Money na MVola intsony raha tsy amin’ny fotoana hialanao amin’ny mTOMADY.
11. Azoko ampiasaina amin’izay mety ilako vola ve ny tahiry mTOMADY ?
Ny petra-bola dia ampiasaina hiantohana ny fahasalamana mandritry ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana ihany.
12. Afaka maka lelavola amin’ny mTOMADY ve ?
Ny fifanakalozana rehetra amin’ny mTOMADY dia atao amin’ny alalan’ny Airtel Money, Orange Money na MVola. Noho izany dia tsy azo atao ny maka lelavola amin’ny mTOMADY.
13. Ohatrinona ny vola betsaka indrindra azo tehirizina amin’ny mTOMADY ?
Tsy misy fetrany ny petra-bola azo atao amin’ny mTOMADY.
1. Misy sarany ve ny fandefasana vola avy ao amin’ny kaonty mTOMADY mankany amin’ny CSB II rehefa handoa ny vidim-panafody ? Tokony efa eritreretina sahady ve izany sarany izany rehefa mikajy ny tahiry ?
Tsy misy sarany ny fandefasana vola handoavana ny saran’ny fitsaboana amin’ny alalan’ny mTOMADY. Ny vola ao anatin’ny faktioranao izay mifanaraka amin’ny fitsaboana ihany no aloanao.
2. Iza avy ireo CSB II/Hopitaly/farmasia ahafahako misitraka ny tolotra rehefa manana kaonty mTOMADY aho ?
Ao amin’ny CSB II, hopitaly sy farmasia mpiara-miasa amin’ny mTOMADY eto Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano ary Antananarivo Avaradrano no ahafahanao misitraka ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vohoka na ny fiterahana. Hanontanio ny 556 na jereo raha misy sary famantarana mTOMADY
3. Ao amin’ny CSB II/Hopitaly/farmasia miara-miasa amin’ny mTOMADY, iza no atoniko ahafahako mampiasa ny mTOMADY ?
Afaka manatona ny solotenan’ny mTOMADY na ireo mpiasan’ny fahasalamana ianao. Efa voahofana amin’ny fampiasana mTOMADY izy ireo.
4. Ahoana no ahafantarako ireo CSB II/Hopitaly/farmasia mpiara-miasa amin’ny mTOMADY?
Ireo toeram-pitsaboana mpiara-miasa dia ahitana ny sary famantarana ny mTOMADY.
5. Ahoana no hanomezana alàlana ny fandoavana ny fanafody/tolotra amin’ny alalan’ny mTOMADY ?
Rehefa handoa ny saran’ny fitsaboana, omeo ny tompon’andraikitra ny laharan’ny telefaoninao. Maharay SMS ianao milaza ny antsipirian’ny fandefasana vola efa natao sy kaody. Omeo ny tompon’andraikitra io kaody io ho fanatanterahana ny fanodoavana ny vola voatonona.
6. Inona ny mitranga raha tsy ampy handoavana ny fitsaboana ilaiko ny tahiriko mTOMADY ?
Handoavana ny faktiora hatramin’izay vola be indrindra voaangona miaraka amin’ny tombony na bonus ihany no afaka ampiasana ny mTOMADY. Raha toa ka tsy ampy izany dia afaka aloanao lelavola ny ambiny na mampiditra vola ao amin’ny kaonty mTOMADY indray ianao amin’ny alàlan’ny kaontinao Airtel Money na Orange Money na mVola.
7. Inona avy ny fitsaboana sy tolotra azoko efaina amin’ny mTOMADY ?
Tanjona amin’ny mTOMADY ny fitantanana mangarahara amin’ny alalan’ny telefaonina. Ny saran’ny fanafody sy ny fitiliana rà mandritry ny vohoka sy ny saram-piterahana any amin’ny CSB II sy ny Hopitalim-panjakana no voakasik’izany.
1. Inona ny hoe tombony na bonus mTOMADY ?
Ny tombony na Bonus mTOMADY dia iray amin’ireo tombotsoa azo amin’ny fampiasana azy. Isaky ny vola harotsakao dia mahazo tombony 50% amin’izany ianao. Mahazo io tombony io avy hatrany ianao ao aorian’ny fandrotsahanao vola.
2. Ahoana no ahazoako ny tombony na bonus mTOMADY ?
Ny tombony na bonus mTOMADY dia mirotsaka eo noho eo ao amin’ny kaontinao mTOMADY raha vao mandrotsaka vola ianao. Maharay SMS manamarina izany ianao.
3. Ahoana no hikajiana ny tombony na bonus mTOMADY ?
Ny tombony na bonus mTOMADY voarainao dia arakaraky ny vola harotsakao ao amin’ny tahiry mTOMADY. Mahazo tombony 50% amin’ny vola harotsakao ianao ary maharay SMS manamarina io vola narotsaka sy ny tombony io.
4. Ao anaty kaonty mTOMADY iray ihany ve no misy ilay tombony na bonus mTOMADY sy ny tahiriko ?
Tokana ihany ny kaonty mTOMADY, noho izany dia voatahiry miaraka ao ny “bonus” azonao.
5. Azoko alaina ve ny tombony na bonus mTOMADY rehefa teraka na raha miala amin’ny mTOMADY aho ?
Raha miala amin’ny mTOMADY ianao dia haverina aminao avokoa ny vola nampidirinao rehetra tao ankoatry ny tombony na bonus mTOMADY.
1. Inona no atao raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso ?
Raha very ny telefaonina na ny karatra fiantso dia manatonà ny tambazotram-pifandraisana ampiasainao hanidy ny laharan’ny karatra fiantsonao (carte SIM). Aorian’izay dia soloy vaovao ny carte SIM. Rehefa azonao ny SIM vaovao dia antsoy ny 556 na manatonà solotenan’ny mTOMADY ahazoanao manohy ny fampiasana ny tahiry mTOMADY. Raha niova ny laharan’ny telefaonina dia ampahafantaro ny mTOMADY izany fiovana izany.
2. Iza no tokony horesahina raha toa ka manana olana?
En cas de problème, appelez gratuitement le 556 ou adressez-vous directement aux agents mTOMADY dans votre localité.
3. Afaka mandefa vola amin’ny olona mampiasa mTOMADY sahala amiko ve aho, avy ao amin’ny tahiriko mTOMADY ?
Ny vola ao ami’ny tahirinao dia tsy azo afindra ho an’ny mpampiasa hafa.
Miala amin´ny mTomady
1. Afaka miala amin’ny mTOMADY ve aho?
Afaka miala amin’ny mTOMADY, amin’ny fotoana rehetra ianao.
2. Inona avy ny antontan-taratasy ilaiko raha miala amin’ny mTOMADY aho ?
Tsy mila taratasy fanamarinana ny fialana amin’ny mTOMADY.
3. Azoko alaina avokoa ve ny vola notehiriziko tamin’ny mTOMADY ?
4. Azoko alaina ve ny tombony na bonus mTOMADY raha miala aminy aho ?
Raha miala mTOMADY ianao dia tsy afaka misitraka ny tombony na bonus.
5. Lasa aiza ny tahiry mTOMADY raha sanatria ka maty?
Ny ambin’ny tahiry mTOMADY dia hafindra makao amin’ny kaonty Airtel Money, Orange Money na MVola raha sanatria ka maty. Mitondra ireo taratasy fanamarinam-pahafatesana ny fianakaviana na olona voatendry hanamarinana izany.
Raha mila fanazavana fanampiny na fanampiana, mifandraisa aminay!
Antsoy maimaimpoana ihany
koa ny laharana 556
556 (Numéro vert)
Tetikasan’ny ONG Doctors for Madagascar iarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
mtomady.com © 2018 | Fepetra Ankapobeny - Fiarovana ny angona manokana
mtomady.mg © 2018 | Conditions générales - Protections des données personnelles